Isigaba somsebenzi kaMoya oNgcwele ngasinye sidinga ubufakazi bomuntu ngaso leso sikhathi. Isigaba ngasinye somsebenzi siyimpi ephakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi okuliwa nakho uSathane, kube ozolungisiswa ngomsebenzi wakhe kuwumuntu. Ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu ungathela izithelo yini kuncike endleleni umuntu afakazela uNkulunkulu ngayo. Lobu bufakazi yibo obudingwa uNkulunkulu kulabo abamlandelayo; wubufakazi obenziwa phambi kukaSathane, futhi ubufakazi bomthelela womsebenzi Wakhe. Ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kwahlukaniseke izigaba ezintathu, futhi esigabeni ngasinye, kudingeka okufanele leso sigaba kumuntu. Phezu kwalokho, njengoba kuhamba iminyaka futhi iqhubekela phambili, okudingwa uNkulunkulu kumuntu kuyaphakama kakhulu. Ngakho, esigabeni nesigaba, umsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu ufinyelela esicongweni, umuntu aze abone iqiniso "ngokubonakala Kwezwi enyameni," futhi ngale ndlela okudingeka kumuntu kuphakama kakhulu, futhi okudingeka kumuntu ekufakazeni kuphakama ngaphezu kwalokho. Uma umuntu ekhula emandleni okusebenzisana noNkulunkulu ngokweqiniso, iyakhula indlela adumisa ngayo uNkulunkulu. Ukusebenzisana Naye komuntu kuwubufakazi okudingeka ukuthi abe nabo, futhi ubufakazi anabo buwukwenza komuntu. Ngakho, ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu unomthelela ofunekayo, nokuthi ngabe bukhona ubufakazi bangempela, kuxhunyaniswe kakhulu nokusebenzisana kanye nobufakazi bomuntu. Uma sewuqediwe umsebenzi, okusho ukuthi, uma konke ukuphatha kukaNkulunkulu kufinyelela esiphethweni, umuntu kuzodingeka ukuthi abe nobufakazi obuphakeme kakhulu, futhi uma umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela esiphethweni, ukungena komuntu kufinyelela esicongweni. Phambilini, kwakudingeka ukuthi umuntu ahambisane nomthetho kanye nemiyalelo, futhi kwakudingeka ukuthi abakezele futhi athobeke. Namuhla, kudingeka ukuthi umuntu alalele zonke izinhlelo zikaNkulunkulu futhi abe nothando oluphakeme lukaNkulunkulu, futhi ekugcineni kudingeka ukuthi aqhubeke nokuthanda uNkulunkulu phakathi kokuhlushwa. Lezi zigaba ezintathu zidingwa uNkulunkulu kumuntu, isinyathelo nenesinyathelo, ekuphatheni Kwakhe kukonke. Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu sijula ngaphezu kwesokugcina, futhi esigabeni ngasinye okudingeka kumuntu kukhulu kakhulu kunokokugcina, futhi ngale ndlela, ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kuya ngokuya kuhlangana. Isizathu salokhu ukuthi okudingeka kumuntu kuphakeme kakhulu kunesimo somuntu futhi kusondelene nezilinganiso zikaNkulunkulu, futhi yilapho lapho isintu sonke siya ngokuya sisuka ethonyeni likaSathane kuze kube wukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela ekupheleni nya, isintu sisonke sizobe sisindile ethonyeni likaSathane. Uma sekufika leso sikhathi, umsebenzi kaNkulunkulu uyobe usufinyelele ekupheleni, futhi ukusebenzisana komuntu noNkulunkulu ukuze afinyelele ekuguqukeni kwesimo sakhe kuyobe kungasekho, futhi isintu sonke siyophila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, futhi kusukela lapho, ngeke kusaba khona ukuhlubuka kuNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke esafuna lutho kumuntu, futhi kuzoba nokusebenzisana okuhle phakathi komuntu noNkulunkulu, okunye kwakho kuzoba impilo yomuntu noNkulunkulu ngokuzwana, impilo evela emuva kokuba ukuphatha kukaNkulunkulu sekuqedwe nya, futhi nomuntu esesindiswe uNkulunkulu ngokugcwele ekuxhakathisweni nguSathane. Labo abangakwazi ukulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu abakwazi ukuthola lolo hlobo lwempilo. Bazobe sebezehlisele ebumnyameni, lapho beyokhala futhi bagedle amazinyo abo; bangabantu abakholwa kuNkulunkulu kodwa abangamlandeli, abakholwa uNkulunkulu kodwa abangalaleli wonke umsebenzi Wakhe. Njengoba umuntu ekholwa kuNkulunkulu, kumele alandele eduze ezinyathelweni zikaNkulunkulu, isinyathelo nesinyathelo; kumele "alandele iMvana noma ngabe iya kuphi." Yilaba bantu kuphela abafuna indlela yeqiniso, yibo abazi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abalandela njengezigqila amagama nezimfundiso yilabo abakhishiwe ngumsebenzi kaMoya oNgcwele. Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, futhi esikhathini ngasinye, kuzoba nesiqalo esisha kubantu. Uma umuntu elandela iqiniso lokuthi "uJehova nguNkulunkulu" futhi "uJesu nguKristu," okungamaqiniso asebenza kuphela enkathini eyodwa, umuntu-ke akasoze ahambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi uyohlala engakwazi ukuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Noma ngabe uNkulunkulu usebenza kanjani, umuntu ulandela ngaphandle kokungabaza, futhi ulandela eduze. Ngale ndlela, umuntu ubengasuswa kanjani uMoya ONgcwele? Noma ngabe wenzani uNkulunkulu, inqobo uma umuntu enesiqiniseko sokuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi ehambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngaphandle kokunqikaza, futhi ezama ukuhlangabezana nezidingo zikaNkulunkulu, pho angajeziswa kanjani? Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ume, izinyathelo zakhe azikaze zime, futhi ngaphambi kokuqeda umsebenzi Wakhe wokuphatha, ubelokhu ematasa, futhi akami. Kodwa umuntu wehlukile: Njengoba ethole ingxenyana yomsebenzi kaMoya oNgcwele, uwuphatha sengathi awusoze waguquka; esethole ulwazi oluncane, akaqhubekeli phambili ukuze alandele ezinyathelweni zomsebenzi kaNkulunkulu omusha; esebone ingxenyana yomsebenzi kaNkulunkulu, ubheka uNkulunkulu ngokushesha njengesithombe esibazwe ngokhuni, futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyohlala eyilesi simo asibona phambi kwakhe, ukuthi sasinje kudala futhi siyoba njalo nangesikhathi esizayo; esethole ulwazi olungatheni, umuntu uziqhenya kangangoba uyazikhohlwa futhi aqale ukumemezela ngesimo nobukhona bukaNkulunkulu okungekho nhlobo; futhi eseqinisekile ngesigaba esisodwa somsebenzi kaMoya oNgcwele, noma ngabe wuhlobo luni lomuntu olumemezela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, umuntu akawamukeli. Laba ngabantu abangeke bakwazi ukwamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele; futhi balukhuni; futhi abakwazi ukwamukela izinto ezintsha. Abantu balolo hlobo bakholwa kuNkulunkulu kodwa abamamukeli uNkulunkulu. Umuntu ukholwa ukuthi ama-Israyeli ayenephutha "ngokukholwa kuJehova bese engakholwa kuJesu," kodwa abantu abaningi babamba iqhaza kulokhu "ukukholwa kuJehova bachithe uJesu" futhi "balangazela ukubuya kukaMesiya, kodwa baphikisa uMesiya obizwa ngokuthi uJesu." Akumangazi-ke ukuthi abantu basaphila ngaphansi kukaSathane emuva kokwamukela isigaba esisodwa somsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi abakazitholi izibusiso zikaNkulunkulu. Lokhu akudalwa ukuhlubuka komuntu? AmaKristu emhlabeni jikelele angahambisananga nomsebenzi omusha wanamuhla abambelele enkolweni yokuthi asenhlanhleni, ukuthi uNkulunkulu uzofeza izifiso zabo ngazinye. Nokho abakwazi ukusho baqiniseke ukuthi kungani uNkulunkulu ezobayisa ezulwini lesithathu, futhi abanasiqiniseko ngokuthi uJesu uzobalanda egibele ifu elimhlophe, futhi bengesho nakancane ngokuqiniseka ukuthi uJesu uzofika ngempela na egibele phezu kwefu elimhlophe ngalolo suku abalucabangayo. Bonke balangazele, futhi badidekile; nabo uqobo abazi nokuthi ngabe uNkulunkulu uzothatha omunye nomunye wabo, ingcosane yabantu abehlukene, bakuwo wonke amahlelo. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu manje, inkathi yamanje, intando kaNkulunkulu - abaqondi kutho kulokhu, futhi akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokubala izinsuku ngeminwe yabo. Yilabo kuphela abalandela ezinyathelweni zeMvana kuze kube sekugcineni abayokwazi ukuthola izibusiso zokugcina, kanti labo bantu “abahlakaniphile,” abangakwazi ukulandela kuze kube sekugcineni kepha bekholwa ukuthi bakuzuze konke, ngeke bakwazi ukubona ukuvela kukaNkulunkulu. Bonke bakholwa ukuthi bangabantu abakhaliphe kakhulu emhlabeni, futhi bayakunqamula ukuqhubeka kokuthuthukisa umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kwesizathu, futhi kubukeka sengathi bakholwa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uzobayisa ezulwini, lapho "abathembeke kuNkulunkulu kakhulu, abalandela uNkulunkulu, abalandela amazwi kaNkulunkulu." Noma "bethembeke ngokweqile" amazwini akhulunywe uNkulunkulu, amazwi abo nezenzo kusabonakala kunyanyisa kakhulu ngoba kuphikisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi benza inkohliso nobubi. Labo abangalandeli kuze kube sekugcineni, abasilelayo emsebenzini kaMoya oNgcwele, futhi ababambelela emsebenzini omdala abahlulekanga nje ukugcwalisa ukwethembeka kuNkulunkulu kuphela, kodwa, baphenduke labo abaphikisana noNkulunkulu, baba yilabo abachitha isikhathi esisha, futhi abazojeziswa. Ngabe bakhona abadabukisa ngaphezu kwabo? Abaningi baze bakholwe ukuthi labo abachitha umthetho omdala futhi bamukele umsebenzi omusha abananembeza. Laba bantu, abakhuluma ngonembeza kuphela, futhi bengawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, bazogcina sebenqanyulelwe amathuba okuthuthuka ngobabo onembeza. Umsebenzi kaNkulunkulu awulandeli imfundiso, futhi yize kungumsebenzi Wakhe uqobo, uNkulunkulu akabambeleli kuwo. Lokho okumele kuphikwe kuyaphikwa, lokho okumele kunqunywe kuyanqunywa. Kepha umuntu uzenza isitha sikaNkulunkulu ngokubambelela engxenyeni encane yomsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha. Akukhona ukuxaka komuntu lokhu? Akukhona ukungazi komuntu lokhu? Uma abantu belokhu benovalo futhi beqaphele kakhulu ngenxa yokwesaba ukungazitholi izibusiso zikaNkulunkulu, yilapho behluleka khona ukuthola izibusiso ezinkulu, kanye nokuthola isibusiso sokugcina. Labo bantu abalandela umthetho njengezigqila bonke bakhombisa ukwethembeka okukhulu emthethweni, futhi abaveza lokho kwethembeka emthethweni, yibo abangabahlubuki abaphikisana noNkulunkulu. Ngoba manje ekuyiNkathi Yombuso hhayi iNkathi yoMthetho, futhi umsebenzi wanamuhla ungeqhathaniswe nomsebenzi wakudala, futhi umsebenzi wakudala ungeqhathaniswe nomsebenzi wanamuhla. Umsebenzi kaNkulunkulu sewuguqukile, futhi ukwenza komuntu nakho sekuguqukile; akusewona owokubambelela emthethweni noma ukuthwala isiphambano. Ngakho, ukwethembeka kwabantu emthethweni nasesiphambanweni akuzukuthola ukuvunywa uNkulunkulu.